people Nepal » आजको राशिफल : भाद्र २९ गते / सेप्टेम्बर १४ तारिख बिहीबार आजको राशिफल : भाद्र २९ गते / सेप्टेम्बर १४ तारिख बिहीबार – people Nepal
आजको राशिफल : भाद्र २९ गते / सेप्टेम्बर १४ तारिख बिहीबार
Posted on September 14, 2017 by Purna Nanda Joshi
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल भाद्र २९ गते बिहीबार इश्वी सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ तारीख आश्विन कृष्ण नवमी तिथी चन्दमा मिथुन राशिमा सूर्य दक्षीणायन बर्षा ऋतु, नवमीश्राद्ध, मातृनवमी, बालदिवस – ज्यो. प. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर।
मित्रजन हरुको साथसहयोग मार्फत बल तथा पराक्रममा बृद्यि हुनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ । कुराकाट्ने ब्यक्ति हरुबाट भने सजग रहनु होला ।
भोजभतेरमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ । शारिरीक अस्बस्थाका कारण कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ । बाणिका कारण आफन्त जनहरु रुष्ट रहनेछन । पठनपाठनमा राम्रो समय रहेको छ । खराब संगतका कारण कार्य क्षेत्रमा साधारण अपजस आईपर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
प्रिय मित्रजनको भेटघाटले मन हर्शित रहनेछ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । पारीबारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य कार्यका निम्ति धेरै श्रम खर्चनु पर्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला ।
सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । आफ्नु लापरवाहिले धनमालको क्षति हुन सक्नेछ । शारिरीक आलस्यताले सताउला । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । यात्रा खर्च दायक रहनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । पारीवरिक शुःख प््राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ
पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । कार्य सम्पादन गर्न बढी परीश्रम र समय ब्यतित हुन सक्छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । कष्टकर यात्रा रहन सक्छ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ ।
खानपान मा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अप्जस सहनु पर्ला । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ ।